सांसद बिमला ओली- मुुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक भए, एमाले भन्छ-आरोप वाहियात - Arthapage
सांसद बिमला ओली- मुुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक भए, एमाले भन्छ-आरोप वाहियात
प्रकाशित मितिः २१ श्रावण २०७८, बिहीबार १४:३३ August 5, 2021
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला वली माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा सार्वजनिक भएकी छन् । दुई दिनअघि आफू एमालेमै रहेको भनेर विज्ञप्ति जारी गरेकी उनले आज आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाइएको बताइन् ।
वलीको दावीअनुसार उनलाई गत १५ साउनमा दाङबाट कब्जामा लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँबाट हिजो आफू ट्वाइलेटको चप्पल लगाएर भागेको उनले बताइन् । अहिले आफू माओवादीमै रहेको उनको भनाइ छ ।
‘म यतै हो, उता भएको भए यता किन आउँथे ? ’ पत्रकारसँग कुरा गर्दै वलीले भनिन्, ‘यताउता भन्ने शब्द नै गलत हो ।’
सांसद वलीले आफूलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्री कार्यालय पुर्‍याएर ५ दिनसम्म बन्धक बनाइएको भनेर लगाएको आरोप एमालेले अस्वीकार गरेको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले वलीकै प्रस्तावअनुसार आफूले उनलाई मुख्यमन्त्री निवासमा पुर्‍याइएदिएको बताए ।
अनलाइन संचारमाध्यम नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ढकालले मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाइएको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । दुई दिनअघि निकालिएको विज्ञप्तिमा वलीले आफ्नै राजीखुसीले हस्ताक्षर गरेको उनको दावी छ ।
आफूलाई लागेको ‘अपहरण’ को आरोपबारे ढकालले भने, ‘दाङमा स्थानीय साथीहरुले उहाँसँग कुराकानी गरिरहनुभएको थियो । उहाँले भूमिश्वरलाई बालाइदिनुस् भनेर खबर पठाउनुभयो । उहाँले बोलाएपछि म गएको हुँ । म हाँलाई भेट्न जाँदा स्थानीय साथीहरूलाई पनि लगेको थिएँ ।’
आफूसँग भेटेपछि वलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेट्ने चाहना राखेको ढकालको भनाइ छ । उनीसँग तीन घन्टा कुरा गरेपछि आफूले वलीका दिदी र भिनाजुका भाइसहित गाडीमा लिएर आएको उनले बताए ।
ढकालले भने, ‘बच्चा हुन् र जबरजस्तिगर्नलाई ? उनको दिदी र भिनाजुको भाइ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । आमासँग बिदा मागेर लुगा फेरिवरी आएकी हुन् । कहाँबाट आयो अपहरणको कुरा ?’
मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाइएको, जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको लगायतका सबै आरोप वाहियात भएको उनले दावी गरे । चाँडै उनको परिवारलाई पनि राखेर पत्रकार सम्मेलन गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
प्रकाशित मितिः २१ श्रावण २०७८, बिहीबार १४:३३ |
Prevरु ३ अर्ब ५० करोड लागतमा कर्णालीको ‘लाइफलाइन’ सडक रत्नराजमार्ग स्तरोन्नती हुँदै
Nextबाँकेमा यस्तो छ कोभिडको तेस्रो लहर बिरुद्धको पूर्वतयारी (अध्ययन प्रतिवेदन सहित)